Progressive Voice Myanmar » စစ်ကောင်စီပါးစပ်က ဘုရားဘုရား၊ လက်က ကားယားကားယား
စစ်ကောင်စီပါးစပ်က ဘုရားဘုရား၊ လက်က ကားယားကားယား
July 26th, 2021 • Author: CDM Monks (Myanmar) • 1 minute read
အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ စောင့်ရှောက်မည်ဟု တဖွဖွပြောလေ့ရှိသူ စစ်ခေါင်းဆောင်တို့က သံဃာအများအပြားကို အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးရိုက်နှက် ညှဉ်းပန်းနေသည်
၃ လကြာ လမ်းပေါ်ထွက် ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေသော မန္တလေးမြို့၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်မှ စာချဆရာတော် အရှင်ရာဇိန္ဒကို အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်သားများက မေ ၂၈ တွင် ကားဖြင့် ဝင်တိုက်ကြသည်။
“ဦးဇင်းတို့ စစချင်း ထွက်လာတုန်းရှိသေးတယ်၊ စစ်ကားတွေရောက်လာပြီးတော့ သေနတ်နဲ့ သုံးချက်လောက် ပစ်တယ်၊ အားလုံးက အလူးအလဲ ပြေးကြလွှားကြတာပေါ့။ ဦးဇင်းကိုတော့ ဆိုင်ကယ်ပေါ် တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကားနဲ့ တိုက်ပြီးတော့ ဖမ်းတယ်။ စစ်သား ၃ ယောက်က ဦးဇင်းခေါင်းကို အချက်ပေါင်းမြောက်များစွာ ရိုက်တယ်” ဟု မကြာသေးခင်က ထောင်မှ ပြန်လွတ်လာသော အရှင်ရာဇိန္ဒက မိန့်သည်။
ဘုန်းကြီးကို လူဝတ်လဲစေကာ နာမည်ကျော် နန်းတွင်းစစ်ကြောရေးစခန်းသို့ ပို့လိုက်သည်။
“ပထမဆုံး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ခိုင်းတယ်။ လက်နှစ်ဖက်ကို ခေါင်းပေါ်တင်ခိုင်းပြီးတော့ ဖားခုန် ခုန်သွားခိုင်းတယ်။ တစ်နေကုန်လုံးပူထားတဲ့ ကတ္တရာလမ်းပေါ်မှာ ဒူးထောက်ပြီးတော့ လက်နှစ်ဖက် ခေါင်းပေါ်တင်ထားခိုင်းပြီး ဒူးကို အားပြုပြီးတော့ ဒရောသောပါးသွားရတယ်ဆိုတော့ မြင်ကြည့်လိုက်ပေါ့၊ ဘယ်လောက်အထိ နာကျင်မလဲဆိုတာ၊ မိနစ် ၃၀ လောက်ကြာတယ်၊ ဦးဇင်းတို့ကို ထားမယ့်အဆောင်ကို ရောက်တဲ့အထိ။ သွားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာလည်း နှေးတယ်ဆိုရင် နောက်ကနေ ရိုက်တယ်” ဟု အရှင်ရာဇိန္ဒက မိန့်သည်။
ယခင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကဲ့သို့ပင် အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ စောင့်ရှောက်သည်ဟု ကြွေးကြော်ထားသော အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်များက ၎င်းတို့ကို အံတုဆန့်ကျင်လာလျှင် လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုသာမက လူများစုကိုးကွယ်ကြသော ရဟန်း၊ သံဃာတော်များကိုပါ အငြိုးတကြီး ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် အကျဉ်းချနေသည်။
သံဃာတော်ပင် မချန်သည့် နန်းတွင်းစစ်ကြောရေး
၆ ရက်ကြာသည့် စစ်ကြောရေးကာလ၏ ပထမဆုံးနေ့မှာပင် ရာဘာစွပ်ထားသော သံတုတ်များဖြင့် ရိုက်နှက်ခဲ့ကြသည်။ မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီခွဲအထိ တပ်အရာရှိနှစ်ဦးက တစ်လှည့်စီ စစ်မေးခဲ့ကြသည်။
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖြစ်လား၊ တပ်မတော်ထောက်ခံပွဲတွေကို တစ်ခါမှ ဝင်မပါခဲ့ဘူးလား၊ စစ်ကောင်စီကို ဘယ်လိုသဘောထားလဲ စသဖြင့် စစ်မေးခံရစဉ် မကြာခဏ ပုဆိုးပြင်ဝတ်သည်ကိုပင် စစ်သားများက မကြိုက်ဟု အရှင်ရာဇိန္ဒက မိန့်သည်။
“ပုဆိုးကလည်း မဝတ်တတ်တော့ ထပြီးတော့ ပြင်ဝတ်တယ်။ အဲ့ဒီလို ပြင်ဝတ်တာကို နှစ်ကြိမ်လောက်ရောက်တော့ သူတို့ မလိုလားဘူး၊ ခါးတောင်းကျိုက်ခိုင်းတယ်။ ဒီမှာ ငါတို့ဒူးတွေလည်း ကွဲနေပြီလို့၊ ဘယ်လိုမှကို မသွားနိုင်တော့ဘူး၊ မင်းတို့ရိုက်မယ်ဆိုလည်း ကြိုက်သလောက်ရိုက်တော့”ဟု မခံရပ်နိုင်သည့်အဆုံး၌ ဆရာတော်က အထက်ပါအတိုင်း ပြောခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
“လူကို လူလိုအုပ်ချုပ်တဲ့ အရပ်သားအစိုးရတစ်ရပ်တော့ ရစေချင်တယ်လို့ ပြောလိုက်တာ အဲ့ဒါ ဦးဇင်းကို နောက်ဆုံးမေးတာပဲ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ‘အောင်မာ မင်းကများကွာ’ ဆိုပြီး သေနတ်ဆွဲကိုင်ပြီး ပစ်မလို့ ချိန်လိုက်သေးတယ်”
ဘယ်၊ ညာ ဒူးနှစ်ဘက်တွင် ဒဏ်ရာဟောင်း ၅ ခုနှင့် နောက်ကျောတွင် ကန့်လန့်ဖြတ်ဒဏ်ရာဟောင်းတစ်ခုရှိသည့် ဆရာတော်က ထိုအကြောင်းများကို အချိန်ယူကာ စဉ်းစားဖြေဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အရှင်ရာဇိန္ဒနှင့် တစ်ရက်တည်းဖမ်းခံရပြီး ဇွန် ၃၀၌ ပြန်လွတ်လာသည့် အမည်မဖော်လိုသည့် ရဟန်းတစ်ပါးကလည်း နန်းတွင်းစစ်ကြောရေစခန်းဂိတ်ဝင်ကတည်းက စနစ်တကျ နှိပ်စက်ခံခဲ့ရသည်ဟု မိန့်သည်။
“တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နှစ်ပေလောက်ပဲ ကွာမယ်၊ အဲဒီလို သွားခိုင်းတာ။ ပထမက ဖားခုန်ခိုင်းတယ်၊ နောက်တော့ ဒူးထောက်ပြီးတော့ လမ်းလျှောက်ရတယ်၊ ကတ္တရာလမ်းကလည်း ပူမှပူ။ ပြီးတော့ အောက်ကနေ ကျောက်ဆူးတွေလည်း စူးတယ်။ လှည့်ကြည့်လို့မရဘူး၊ ရပ်နေလို့မရဘူး၊ ရပ်နေရင် သူတို့က ရိုက်တယ်”ဟု စစ်ကြောရေးဒဏ်ကြောင့် နေ့စဉ်နီးပါး ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို ခံစားနေရသည့် အဆိုပါ ရဟန်းက မိန့်သည်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းပေါများသော မန္တလေးတွင်သာမက အခြားဒေသတွင်လည်း သံဃာတို့ နှိပ်ကွပ်ခံနေရသည်။
မတ် ၁၁ ရက်နေ့က ဆန္ဒပြလူထုကို ရပ်ကြည့်နေသည့် မိုးကုတ်မြို့ ရေပူဆရာတော် အရှင်ဣန္ဒကနှင့် အခြားရဟန်းတစ်ပါး အတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခံရသည်ကို အွန်လိုင်းရုပ်သံဖိုင်တစ်ခု၌ တွေ့ရသည်။ တစ်လမပြည့်မီမှာပင် ဆရာတော်ကို ထောင် ၃ နှစ် ချလိုက်သည်။
ဇူလိုင် ၄ တွင် ကချင်ပြည်နယ်၊ ဟိုပင်မြို့နယ်၊ သဲဂုဏ်ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ စစ်ကောင်စီတပ် သွားရောက်ပြီး ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကို ကြိုးတုပ်ရိုက်နှက်ခဲ့ကြသည်။
ရွာမှ ဆန္ဒပြပွဲပုံများကို သတင်းဌာနသို့ ပေးပို့ကြောင်း တိုင်ကြားခံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ရွာခံများက ယူဆနေသည်။
စစ်အာဏာရှင်တို့က သံဃာများကို ထိုကဲ့သို့ ပြုမူဆက်ဆံသည်မှာ ယခုမှ မဟုတ်ပေ။
၂၀၀၇ နှစ်လယ်တွင် မကွေးတိုင်း၊ ပခုက္ကူမြို့သံဃာတော်များဦးဆောင်ပြီး ယခင်စစ်အစိုးရကို ချီတက်ဆန္ဒပြရာမှ ပေါ်ပေါက်လာသည့် သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုကို ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးဟု လူသိများကြသည်။
မြို့ကြီးများတွင် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အားကောင်းခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် စစ်တပ်က ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲခဲ့သည်၊ သံဃာ ၃၀၀ ခန့်ကို ပုဒ်မအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖမ်းဆီးထောင်ချကာ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၆၁ ‌ကျောင်းကို ချိတ်ပိတ်ခဲ့သည်။
သံဃာတော်များသည် ပြန်လွတ်လာချိန်တွင် သီတင်းသုံးခဲ့သည့်ကျောင်းက လက်မခံ၍ လမ်းဘေး တဲထိုးနေရခြင်း၊ လူထွက်ကာ ကြုံရာကျပန်းအလုပ်လုပ်ရခြင်း စသဖြင့် အများအပြား ဘဝပျက်ခဲ့ရသည်။
စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်သည် ဆန့်ကျင်သူမှန်သမျှကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်ရန် ဝန်မလေးကြောင်း ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ ဆရာတော် မင်းသုည(ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်)က Myanmar Now ကို မိန့်ကြားသည်။
“အဲ့ဒီတုန်း (၂၀၀၇) ကဆိုရင်လည်း သံဃာတော်တွေဟာ သင်္ကန်းရုံပြီးတော့ မေတ္တာသုတ်တွေ ရွတ်ကြတယ်။ မေတ္တာပို့တွေ ဆိုပြီးတော့ သွားကြတယ်။ ဒါကိုလည်းပဲ သူတို့(စစ်တပ်)က သေနတ်တွေနဲ့ ပစ်၊ ရက်ရက်စက်စက် ဖြိုခွင်းကြတယ်။ ကျောင်းတိုက်တွေကို သူပုန်ဖမ်းဆီးသလို စီးပြီးတော့ ကျောင်းတိုက်တွေမှာ သွေးမြေကျရတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
“တချို့ဆရာတော်တွေ ထောင်ထဲမှာပဲ ပျံလွန်တော်မူကြတယ်။ တချို့လည်း ထောင်ကထွက်လာပြီးတော့ ထောင်က ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပဲ ‌ပျံလွန်တော်မူကြတယ်။ ပြောချင်တာက ခေတ်အဆက်ဆက် သူတို့(စစ်တပ်)ဟာ သူတို့ကို တော်လှန်တဲ့ ရဟန်း၊ ရှင်၊ လူ မှန်သမျှ ကျောင်းသားပြည်သူကို ရန်သူသဖွယ်ထားကြတာပဲ”
နှိပ်စက်ခံရသဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာများကို ခံစားနေရသည့်၊ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင် ဦးဂမ္ဘီရဟု ထင်ရှားသည့် ဦးညီညီလွင်သည် ထောင်မှ လွတ်လာသည့် ၂၀၁၂ တွင် နေစရာကျောင်းမရှိတော့ကြောင်း ဆရာတော် မင်းသုညက မိန့်သည်။
“သူ့ကို ထောင်ထဲမှာလည်း ရာဘာစွပ်ထားတာတွေနဲ့ ရိုက်တာ။ အဲ့သလိုတွေ ရိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဦးနှောက်ထဲမှာ Spot (အစက်အပျောက်) တွေ ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒါ ဒီမှာလည်း သူ့ကို ကုပေးရဲတဲ့သူလည်း မရှိ၊ ဖိအားတွေနဲ့ဆိုတော့ ခဲရာခဲဆစ်ထွက်သွားပြီးတော့ ချင်းမိုင် (ထိုင်းနိုင်ငံ ဇင်းမယ်မြို့) မှာ ဦးနှောက်အသေးစား ခွဲစိတ်ကုသမှုလုပ်ရတယ်” ဟု မိန့်သည်။
“(ခွဲစိတ်မှုမတိုင်ခင်ကဆိုရင်) ဒီဒဏ်ရာကြောင့် သူက ခေါင်း တအားကိုက်လာပြီဆိုရင် သူ့ခေါင်းကို တစ်ယောက်က ဖိထားရတယ်။ နှိပ်ပေးရတယ်။ မနှိပ်ထားရင် ဒီခေါင်းကြီးက ပေါက်ထွက်တော့မလိုလို၊ ထပြေးချင်သလိုလို အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာ”
၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်သူ အရှင်စန္ဒာသီရိ ခေါ် ဦးဇင်းပုရစ်ကို CDM အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူဟု စစ်ကောင်စီက ခေါင်းစဉ်တပ်ကာ မတ် ၁၃ တွင် အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးပြီး ထောင် ၃ နှစ်ချခံရနိုင်သော ပုဒ်မ ၅၀၅-က ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားသည်။
“စစ်အာဏာရှင် တိုင်းပြည်မှာရှိဖို့ မလိုအပ်ဘူး။ ရှိတာကိုလည်း မကြိုက်ဘူး။ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ စစ်အာဏာရှင်အမြတ်ပြတ်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်” ဟု အရှင်စန္ဒာသီရိက အဖမ်းမခံရမီ ရက်ပိုင်းအလိုက Myanmar Now ကို မိန့်သည်။‌
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအချိန်၌ သံဃာတော်တချို့ကို ထုပ်တန်း၌ ဇောက်ထိုးဆွဲပြီး ပေါင်နှစ်ဖက်ရှိအသားစများ ပုတ်သည်အထိ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ကြောင်း ထိုအချိန်က ထောင်တွင်းရှိနေခဲ့သူများထံမှ သိရသည်။
ထိုသို့ ရဟန်း၊ သံဃာတော်များပါမချန် စစ်အာဏာရှင်ခေတ်အဆက်ဆက် ဖမ်းဆီးရိုက်နှက် ထောင်ချနေသော်လည်း ၎င်းတို့အလိုကျ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူများဟု အမည်ခံထားကြသော ဘုန်းကြီးများကမူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့၏ လှူဖွယ်ဝတ္ထုများကိုပင် စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ခံရယူနေကြသည်။
စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် သက်ပြည့်ပင်စင်ယူရန် ၅ လအလိုတွင် မဲစာရင်းမှားယွင်းသည်ဟု အကြောင်းပြပြီး အာဏာသိမ်းလိုက်သည့် နာရီပိုင်းအတွင်းမှာပင် စစ်တပ်ကို ဝေဖန်တတ်ကြသော ဆရာတော်များကို ဖမ်းလိုက်သည်။
ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်မှ သက်တော် ၄၀ ဝန်းကျင် ဆရာတော် အရှင်သောဘိတ (အလင်္ကာကြယ်)ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁ မနက်တွင် ဝင်းတံခါးရိုက်ဖျက်ပြီး ကျောင်းထဲ ဝင်ရောက်သွားသည့် စစ်သားနှင့် ရဲများက လက်ထိပ်ခတ်ဖမ်းဆီးကြသည်။
စစ်တပ်ကို အွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွင် ဝေဖန်သည့် ဆရာတော်ကို ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ဖြင့် ၂ နှစ်ကြာ စစ်ဆေးနေသောချိန်တွင် အဖမ်းခံရခြင်းဖြစ်သည်။ အဖမ်းခံရပြီး၂ ရက်အကြာတွင် ဆရာတော်ကို ထိုအမှုဖြင့် ထောင် ၂ နှစ် ချလိုက်သည်။
“ကျွန်တော်မလုပ်ရဲတာ ဘာမှမရှိဘူး” ဟု စစ်ခေါင်းဆောင်က ပြောဆိုပြီး လများမကြာမီ အာဏာသိမ်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
စစ်ကောင်စီက ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် သံဃာတော် ၂၃ ပါး အနည်းဆုံးရှိကြောင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) ၏ စာရင်းနှင့် Myanmar Now က အတည်ပြုနိုင်သော စာရင်းများအရ သိရသည်။
ဇွန် ၃၀ တွင် စစ်ကောင်စီက အချုပ်သား ရာနှင့်ချီပြန်လွှတ်ရာ မန္တလေး၊ အိုးဘိုထောင်မှ အရှင်ရာဇိန္ဒ၊ အရှင်မဏိသာရနှင့် အရှင်ဇဝနတို့လည်း ပြန်လွတ်လာသည်။
သံဃာတော်များကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်း၊ ဆက်လက်ချုပ်နှောင်ထားခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းလိုသော်လည်း စစ်ကောင်စီ ပြန်ကြားရေးအရာရှိတို့ကို တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။
စစ်အာဏာသိမ်းသည့်ညမှာပင် ဆရာတော်ကြီးများကို ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းက စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့၏ သဘောထားကို ပို၍ ပေါ်လွင်စေသည်ဟု ဆရာတော်မင်းသုညက မိန့်ကြားသည်။
“ပြောသလိုသာ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို တကယ်စောင့်ရှောက်တယ်ဟေ့ဆိုရင် ဒီလို ဆရာတော်ကြီးတွေကို ဘာအပြစ်မှမရှိဘဲနဲ့ ဖမ်းစရာအကြောင်း တစ်စက်မှမရှိပါဘူး”ဟု ဆရာတော်က မိန့်သည်။
ရွှေညဝါဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟကလည်း “တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ဂယက်ထအောင် လုပ်သူသည် အကြီးမားဆုံး သမိုင်းတရားခံဖြစ်မည်” ဟု အဖမ်းမခံရခင် တစ်ရက်အလို ဇန်နဝါရီ ၃၁ တွင် မိန့်ကြားခဲ့သေးသည်။
အရှင်ရာဇိန္ဒကလည်း စစ်ခေါင်းဆောင်များက ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြပြီး နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်နေသည်ဟု ဆိုသည်။
“ပြောရတာတောင် အားနာပါတယ်ဗျာ။ ခွေးပါးစပ်က နတ်စကားထွက်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးဗျ၊ အဲ့လိုပဲဗျ။ သူတို့က တကယ်အသုံးချချင်တဲ့အခါရောက်တော့ အမျိုးဘာသာ သာသနာဆိုတဲ့ စကားလုံး။ သူတို့ မလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့ အခါကျတော့ ဒီနေ့လမ်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ သံဃာတော်တွေကို ဖြိုခွဲတော့တာပဲ။ ပစ်ခတ်တော့တာပဲ။ သတ်ဖြတ်ပစ်တော့တာပဲ” ဟု အရှင်ရာဇိန္ဒက မိန့်သည်။
၂၀၁၄ တွင် စစ်တပ်၏ နည်းလမ်းပေါင်းစုံ ပံ့ပိုးကူညီမှုများဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာသော အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့(မဘသ) အဖွဲ့အစည်းကြီးသည် ဘာသာ၊ လူမျိုး မတူသူများအပေါ် အမုန်းတရားပွားစေရန် အစွန်းရောက်ဟောပြောမှုများကြောင့် ဖွဲ့စည်းပြီးသုံးနှစ်အကြာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သော အစိုးရက ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။
စစ်တပ်ထောက်ခံထားသော မဘသဆရာတော်များထဲမှ တချို့သည် အစွန်းရောက်ဟောပြောမှုများ၊ ကိုယ်ကျင့်သီလမကောင်းသတင်းများဖြင့် ကျော်စောကြသည်။
မဘသကိုယ်တော် ဦးဝီရသူသည် လူမျိုး၊ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်ဟောပြောမှုများကြောင့် ကမ္ဘာကျော် တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးတွင် “အကြမ်းဖက်ဗုဒ္ဓဘာသာပြယုဂ်” အဖြစ် ဖော်ပြခံခဲ့ရပြီး ၂၀၁၇ နှစ်ဆန်းပိုင်းက လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)ပါတီ၏ ဥပဒေအကြံပေး ရှေ့နေ ဦးကိုနီသေဆုံးသည့်ဖြစ်စဉ်မှာပင် လူသတ်သမားများကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ၎င်း၏ Facebook အကောင့်ဖြင့် ရေးတင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုယ်ဝန်ရသော ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ လူမြင်ကွင်းမှ ယနေ့တိုင်ပျောက်ကွယ်သွားသော MRTV-4 ဆရာတော်ဟု လူသိများသည့် အရှင်ကဉ္စနောဘာသ (ဦးရွှေဝါထွန်း)သည် မဘသဩဝါဒစရိယဆရာတော်ဟု ထင်ရှားခဲ့သည်။
ထိုသို့ မဘသအဖွဲ့၏ လုပ်ရပ်များကြောင့် သာသနာ ညစ်နွမ်းပျက်စီးခဲ့ရသလို စစ်အာဏာရှင်စနစ်သာ ဆက်လက်တည်မြဲသွားပါက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာကွယ်ပျောက်သွားနိုင်သည်ဟု စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို အလိုမရှိသော ရဟန်း၊ သံဃာတော်များက ဖွင့်ဟကြသည်။
“ဒီ စစ်အာဏာရှင်ကို ဦးဇင်းတို့ အပြီးကို တော်လှန်မှဖြစ်မယ်။ အပြီးမတော်လှန်ရင် သာသနာလည်းပျက်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဓမ္မဘက်တော်သားတွေ လုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင် အဓမ္မဘုန်းကြီးတွေပဲ ရှိမှာလေ။…ဒါကြောင့်မို့လို့ စစ်အာဏာရှင်လက်ထက်မှာ ဦးဇင်း ဧကန်မုချပြောရဲတယ်၊ သာသနာဟာ ပျက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်”ဟု ဆရာတော် မင်းသုညက မိန့်ကြားလိုက်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ မှ ဇူလိုင် ၂ အထိ စစ်ကောင်စီတပ်က ဖမ်းဆီးခဲ့သော သံဃာတော်များ
3. အရှင်တေဇနိယ (မန်းတောင်ခြေ)
4. အရှင်သောဘိတ (အလင်္ကာကြယ်)(ထောင် ၂ နှစ်-၆၆/ဃ)
5. အရှင်ဣန္ဒက (မိုးကုတ်ရေပူဆရာတော်)(ထောင် ၃ နှစ်-၅၀၅-က)
6. ရေပူဆရာတော်၏ တပည့်
7. အရှင်စန္ဒာသီရိ(ခ)ဦးပုရစ် (သင်္ကန်းကျွန်း)
8. အရှင်ဇဋိလ (ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊ ဘွမ်ဘွေးမြောက်ရွာ)
9. အရှင်ဣန္ဒာစာရ (တောင်သာမြို့နယ်၊ သဲတောရွာ)
10. အရှင်ပညာဝံသ (မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ရှမ်းစုတောင်ရပ်၊ မန္တလေးကျောင်း)
11. ရေချိုကျောင်းဆရာတော်(တနင်္သာရီတိုင်း၊ သရက်ချောင်းမြို့နယ်)
12. ဇီးတောကျောင်းဆရာတော်(တနင်္သာရီတိုင်း၊ သရက်ချောင်းမြို့နယ်)
13. ဂုံညင်းဆိပ်ဆရာတော် (တနင်္သာရီတိုင်း၊ သရက်ချောင်းမြို့နယ်)
14. အောင်ရတနာကျောင်းဆရာတော် (ပဲခူးမြို့)
15. အရှင်ရာဇိန္ဒ (မန္တလေး မစိုးရိမ်တိုက်သစ်-ကားနှင့်တိုက်ဖမ်းဆီးခံရသူ
16. အရှင်မဏိသာရ (မန္တလေး မိုးကောင်းတိုက်-သေနတ်ဖြင့်ပတ်ခတ်ဖမ်းခံရသူ)
17. အရှင်ဇဝန(မန္တလေး ဘုရားကြီးတိုက်၊ ကန်သာကျောင်း)
18. အရှင်ဇေယျဒိသ (မြတောင်သပိတ်စစ်ကြောင်း ဝန်းရံပေးရင်းအဖမ်းခံရသူ)
19. အရှင်သောမသီရိ (မြတောင်သပိတ်စစ်ကြောင်း ဝန်းရံရင်းအဖမ်းခံရသူ)
20. အရှင်ပညာသာမိ(မြစ်သားမြို့နယ်၊ မြင်းခြံကုန်းကျေးရွာ)
21. အရှင်တဇနိယ(မြစ်သားမြို့နယ်၊ မြင်းခြံကုန်းကျေးရွာ)
22. အရှင်ဝိသုတ(မြစ်သားမြို့နယ်၊ မြင်းခြံကုန်းကျေးရွာ)
23. ဦးပဉ္ဇင်းဝေယံမင်း(အောင်ဘုံကျောင်း၊ ခင်ဦးမြို့နယ်)